February 2019 – Nagarik Network
वैदेशिक रोजगारमा विभेद
सरकारले कानुनी रूपमा १ सय १० देश खुला गरे पनि अझैं पनि नेपालीको मुख्य गन्तव्य खाडी र मलेसिया नै बनिरहेको छ। कोहि नेपाली खाडीमा महिनाको २० हजार कमाउछन् भने कोहि नेपाली मकाउमा महिनाको २ लाख कमाउछन्।
हातमा हरियो पासपोर्ट, काधमा २ जोर कपडा बोकेको झोला, मनभरि परिवारको माया अनि सन्तानको उज्वल भविष्यको सपना। यी र यस्तै कुरा तरंगित हुँदै रोजगारीको खोजीमा दैनिक करिव एक हजार नेपालीले मुलुक छोडछन्।
विदेशिने नेपालीको मनमा तरंगित हुने भाव हुन् यी जसको अनुभव गर्न नसके पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरेक दिन देखिने यी र यस्तै पीडा बोध हुने दृश्यले बेरोजगार नेपालीको कहाली लाग्दो वास्तविकता उदाङ्गो पार्छ। नीति निर्माण तहबाट सम्बोधन हुन् नसकेको यो दैनिकीले राज्यलाई सधैं झक्झक्याउछ। नियतिको खाडलमा धकेलिएका यी नेपाली एउटै बाटो बाट विदेशिए पनि उनीहरु गन्तव्य घाम र जुन जस्तो फरक छ। कोहि राम्रो काम र दाम पाउने गन्तव्यमा पुग्छन त केहीको श्रम पसिना मरुभूमिको बालुवामै बिलाउछ। बाध्यताको बाटो बाट धन कमाउन सँगै विदेशिए पनि उनीहरुको श्रम र पसिनामा देखिएको अन्तर “वैदेशिक रोजगारमा विभेद” डलरको कथाको सातौँ शृंखला।
नेपाली कांग्रेसले न पराजयको जिम्मेवारी कसैलाई बोकाउन सकेको छ न आफू तङ्ग्रिने गरी संसद्मै भूमिका खेलेको छ। तङ्ग्रिएला कांग्रेस ? नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी नागरिक फ्रन्टलाइनमा।
किन घट्दैछ कम्युनिस्ट साख ? नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य, मणि थापा।
जापान सपनाले फेरिएको दैनिकी
खोटाङका मविन्द्र राई र राजधानीको चाबहिल घर भएकी भवानी कुँवरले खाना बनाउन एक अर्कोलाई गरेको सहयोग देख्दा लाग्ला पक्कै पनि यी श्रीमान श्रीमती नै होलान। तर भवानी र मविन्द्रबीच न रगतको नै नाता छ, न यी दुई बीच २ महिना पहिला कतै भेट नै भएको थियो। तर यी दुवैको सपना भने एउटै छ, रोजगारी गर्न जापान जाने। त्यहि सपनाले यी दुईको भेट हुन्छ राजधानीमा रहेको एक जाप्निज भाषा सेन्टरमा। जाप्निज भाषा सिकाइने र बस्ने होस्टलको समेत व्यवस्था भएको यो सेन्टरमा बसेका यी दुवैको दैनिकी अहिले फेरिएको छ। जापान सपनाले फेरिएको दैनिकी डलरको कथाको छैठौं शृंखला:
सरकारको एक वर्ष। “प्रतिपक्षको नजर”। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल नागरिक फ्रन्टलाइनमा।
लभ सिजनमा सुविन भट्टराईका लभ टिप्स
भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालले कडा आलोचनासहितको वक्तव्य जारी गरेपछि त्यसलाई लिएर पार्टीमा मतभेद उत्पन्न भएको छ। भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपाका दुई अध्यक्ष दाहाल र केपी शर्मा ओलीबीच दोहोरी चलिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले बुधबार ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रममा दाहालको वक्तव्यलाई ‘टङ स्लिप’ को रुपमा अथ्र्याएका थिए। त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप अध्यक्ष दाहालले बिहीबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग ‘भेनेजुएला प्रकरणमा आफूले जारी गरेको वक्तव्यलाई पार्टी सचिवालयले आधिकारिक भनिसकेको अवस्थामा एउटा व्यक्तिले के भन्छ भन्ने कुराको अर्थ नहुने’ बताएका थिए।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स एउटा महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेकाे छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत भन्दाबढी हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई कसरी वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउने, कसरी उत्पादन तथा रोजगार मुलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशत रहे पनि त्यसको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। त्यसले केवल उपभोग प्रवृतिलाई मात्र प्रोत्साहित गरिरहेको देखिएको छ। अर्को हिसाबले भन्दा रेमिट्यान्सको सहि ढंगले प्रयोग हुन सकेन भने त्यसले परोक्ष रुपमा व्यापार घाटा बढाउने जोखिम रहन्छ।
एनसेल कर प्रकरण
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध नेपालमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेकै दिन बेलायतमा समेत सरकारको विरोध गरिएको छ । वेलायतस्थित नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिले सोमवार लण्डनस्थित नेपाली दूतावास भवनमा जम्मा भएर सरकारको विरोध गर्दै सरकारबिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जनसम्पर्क समिति वेलायतका सभापति युवराज गुरुङको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलको टोलीले वेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ८ बुँदे विरोध स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पहिलो सन्तानको मुखसम्म हेर्न पाएनन् । भट्टराई र हिसिला यमीको २०४० सालमा जेठो सन्तानको रूपमा छोरा जन्मीए पनि विडम्वना जन्मेको केहि घण्टामै उसले संसारबाट विदा लियो ।
दोस्रो सन्तानको रूपमा छोरी अर्थात मानुषी यमी भट्राई जन्मीइन् । छोरी जन्मनु उनका लागि उत्सव थियो । छोरी जन्मनु केहि महिना अघि नै पूर्व डा. भट्राईले ‘डर्टस अफ कार्ल मार्क्स ’ छोरीका लागि उपहार छोडेका थिए पत्नी हिसिलालाई । पुस्तकमा उनले हस्ताक्षर गरेका थिए । बाबुराम र मानुषीको भावनात्मक भन्दा पनि बढी बौद्धिक सम्बन्ध रहेको आमा हिसिलाको भनाई छ । कहिलेकाँहि आफुसँग भन्दा पनि छोरी मानुषीसँग बाबुरामको कुरा बढी मिल्ने उनी बताउँछिन् ।
बाबुराम भट्राई र हिसिलाको सम्बन्ध भावनात्मक भन्दा पनि विवेकसंगत बढी रहेको लाग्छ । बाबुराम र हिसिलाको भारतमा विवाह हुँदा पनि उनीहरूले विवाह गर्नु पूर्व एउटा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा लेखिएको थियो “हाम्रो सम्बन्ध भनेको समाज रूपान्तरणका निम्ती साधक हुनुपर्छ । जतीबेला हामीलाई बाधक लाग्छ त्यत्ती बेला यो टुट्न पनि सक्छ ।” चालिस वर्षको अन्तरालमा अहिले टुट्ने लक्षण भन्दा पनि झन् बलियो हुँदै गएको बाबुरामले सुनाए ।
२०६५ मा अर्थमन्त्री, २०६८ भाद्र देखि २०६९ साल चैत्रसम्म मुलुकको ३६ औ प्रधानमन्त्री बने बाबुराम । त्यसपछि तत्कालिन एनेकपा माओवादी पार्टीको उपाध्यक्ष पद र संसद सदस्यता २०७२ साल असोजमा परित्याग गरे । विसं २०७३ साल असार २७ गते औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ शक्ती पार्टी नेपाल दर्ता गरे । बाबुराम भट्राईले पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय सबैभन्दा पहिले छोरी मानुषीसँग भनेका थिए । त्यत्ती बेला मानुषी अचम्मीत परेकी थिइन् । मानुषीले भन्छिन् ‘ बाले यस्तो निर्णय एक दिनुुहुन्छ भन्ने थियो तर यस्तो अवस्थामा लिनु हुन्छ भनेर सोचेकी पनि थिएन ।’
बाबुरामलाई लाग्छ सम्बन्ध भनेको जहिले पनि पूरक हुनुपर्छ । हामी धेरैले आफू जस्तो छौ उस्तै अर्को पनि खोज्छौ तर उनलाई त्यो ठिक लाग्दैन । आफूभन्दा विपरित हुनुपर्छ । बाबुराम अन्तरमुखी छन् । हिसिला बहिरमुखी गुण भएकी छिन् । उनलाई हिसिला हुँदा एकदमै सहज लाग्छ । हिसिलाले गर्दा आफु बढी समाजिक भएको मान्छन् बाबुराम । राजनीतिक परिवार र त्रासको वातावरणमा हुर्कीएकी मानुषीलाई आमा बुवाको अनुपस्थिती भन्दा पनि आमाबुवाको उपस्थिती अनौठो लाग्छ ।
आफ्नो सफलतामा भाइ शिव भट्राई, बुवा र आमाको सहयोग धेरै ठूलो रहेको उनलाई लाग्छ । नेपाल, बेलायत, नैनीताल, दार्जिलिङ हुँदै २०१६ मा दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विद्यालयबाट राजनीति शास्त्रबाट एमफिल सकेकी मानुषीले पीएचडीको पढाइ छोडेर नेपाल फर्किइन् । मानुषी बा हुर्केको, पढेको परिवेशबाट पनि आफुले धेरै कुरा सिकेको बताउँछिन् ।
मानुषीको तनहुँका जेकेन्द्र श्रेष्ठसँग प्रेम विवाह भयो । छोरीको विवाह हुँदा बाबुराम निकै भावुक भए । भावुक हुनुको कारण पनि रहेछ । सानो छँदा गाँउघरमा विवाहमा बाजा बजीरहँदा दुलही रूदाँ बाबुराम पनि रूने रहेछन् । जसले गर्दा उनी छोरी मानुषीलाई अन्माउँदा भावुक बनेका रहेछन् ।
मानुषीसँग पनि विवाहको रमाइलो अनुभुती रहेछ । विवाह समारोह सकिएपछि जानुपर्छ भन्ने उनले सोचेकी रहिन्छन् । समारोह सकिएपछि मानुषी लुगा चेन्ज गर्न गएकी थिइन् । त्यत्तीकैमा ल विदाइ हुन्छ अब भनेर बोलाउन आएपछि आफु झसङ्ग भएको बताइन् । गाडीमा चढीसकेपछि ‘आमाले जेकेन्द्र जीसँग ल है छोरीको ख्याल राख्नु है’ भनेपछि मात्र सेन्टीमेन्टल बनाएको थियो । हो साच्चीकै जाँदैछु जस्तो लाग्यो । मानुषी र बाबुराम भट्टराईका रूचीमा पनि खासै फरक भएको हिसिला बताउँछिन् ।
कार्यक्रम “सम्बन्धहरु” मा आधारित भएर लेखिएको –बाँकी भिडियो
नेपाल सरकार कुटनीतिमा अपरिपक्क देखिएकै हो त ? नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्रि प्रदीप ज्ञवाली, नागरिकको स्टुडियोबाट नागरिक फ्रन्टलाइनको लाईभ प्रसारणमा।